Puntland oo amar dul-dhigtay hay'addaha shaqaalaysiiya ajaaniibta
Tani ayaa qayb ka ah qorshaha xukuumada ee xakameynta shisheeyaha u soo shaqo doonta dalka | Xuquuqda Sawirka: PSH
GAROWE, Puntland – Wasaarada Shaqada iyo Shaqaalaha ayaa fartay shirkadaha, goobaha caafimaad ee gaarka loo leeyahay iyo hay'addaha caalamiga ee ka howlgala in ay soo gudbiyaan xogta howlwadeenadooda.
Sidda ku cad war-saxaaafadeed kasoo baxay wasaaradda, xarumahaasi ayaa laga doonayaan in ay kusoo gudbiyaan macluumaadkaasi muddo bil ah oo ka bilaabaneysa 14-ka May illaa iyo 14-ka 2019.
Xogta la doonayo oo ah heshiisyada shaqo, CV-yadda iyo Dal ku galka ayaa si gaar ah waxaa looga baahan yahay shaqaalaha ajnabiga ah, sidda laga soo xigtay bayaanka.
Wasaaradda oo sidoo kale u digtay hay’addahaasi in sifo aan sharci ahayn ay shaqaalaysiiyaan shaqsiyaad shisheeye ayaa ku tartarsiisay in ay kusoo war-geliyaan wasaarada kahor inta aysan dalka keenin.
Go’aankaan ayaa imaanaya xili bishii hore madaxweyne Saciid Cabdullaahi Deni uu ka dhawaajiyey in xukuumadiisa ay xakameyn doonto shaqaalaha ajaaniib ah si kuwa wadaniga ah ay fursad u helaan.
Puntland, maamul dhisan in ka badan 20-sano isla markaana amni badan uu ka jiro, ayaa sanadihii u dambeeyay waxa uu soo jiitay shaqaalo ajaaniib ah, inkasta oo ay daaqada kala baxaan dhalinyarada dalka wax ku baratay.
Ciidamo ayaa goobta xiray weerarka kadib, iyadoo goobta laga qaadey dhaawaca...